अस्थिरताकाे नजिर बसाउने कि राजनीतिलाई लिकमा फर्काउन नेतृत्व बदल्ने ?
२०४८ सालपछिदेखि २०५० को दशकको एक समय थियो, जतिबेला नेपाली राजनीति गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको क्रियाकलाप वरिपरि चक्कर लाउँथ्यो । २०५० को दशकको अन्ततिरबाट त्यो राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण-केन्द्र प्रचण्डको वरिपरि परिक्रमा गर्न थाल्यो । अहिले त्यो स्थितिमा पनि परिवर्तन आएको छ । हालसालैबाट नेपाली राजनीति, नकारात्मक तवरले होस् वा सकारात्मक तवरले, प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको कृत्य वरिपरि घुम्न थालेको छ । गर्न त यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको मात्र असंवैधानिक विघटन गरेका छन् । तर, यस दौरानमा उनले नेपालको संविधानलाई नै विधिको शासनको लिकबाट बाहिर लान खोजेका छन् ।
सामान्य परिस्थितिमा संविधानबमोजिम कदम उठाएर नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जानु संसदीय प्रणालीमा हरेक प्रधानमन्त्रीका लागि सामान्य कुरा हो । तर, यहाँ संविधानबमोजिमकाे सामान्य घटना भइरहेकाे छैन, देशको राजनीतिक इतिहास र संविधानको भविष्य नै यता कि उता बनाउने असाधारण राजनीतिक घटनाक्रम मञ्चन हुँदै छ । देश अत्यन्त ठूलो संवैधानिक संकटमा फँस्दै छ ।
यो कदमले प्रम स्वयम्, उनको पार्टी, आर्थिक रूपमा चरम संकटमा परेको आजको देश र कोरोनाग्रस्त जनता कसैको पनि हित नगर्ने निश्चित हुँदाहुँदै, साथै सरकार बनाउने थुप्रै विकल्प पार्टीभित्र र बाहिर हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले उनको पार्टीमा घरझगडा तीव्र भयो भनेर संविधानमा हुँदै नभएका प्रावधान प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा पाँचै वर्षका लागि संसदको दुवै सदन कायम रहने, बहुमतप्राप्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने तथा संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्था नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र २०५० को दशकको जस्तो सरकारको सनकमा संसदको छोटो आयु हुने स्थितिको अन्त्यका लागि गरिएको हो । तर, यदि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको यो असंवैधानिक कदमलाई न्यायालयले वैधानिकताको ल्याप्चे लगाइदिने हो भने अब उप्रान्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको बेठीक पाइला र प्रवृत्तिको पार्टीभित्रबाट विराेध गर्न सम्भव हुने छैन ।
कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले सग्लै पाँच वर्षको आयु देख्न पाउने छैन । नजिर यो बस्नेछ कि नेपालमा प्रधानमन्त्रीबाट मनपरी संसद विघटन र राजनीतिक अस्थिरता अब एउटा स्थायी परिघटना हुन जानेछ ।संसदबाट सरकार बन्न सक्ने सामान्य अवस्था भएसम्म संसदको आयु ५ वर्ष नै रहने र संविधानमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भन्ने वर्तमान संविधानको राजनीतिक स्थिरतामुखी व्यवस्थाको संशोधन हुन जानेछ ।
अबदेखि सत्तारुढ प्रधानमन्त्रीले जे बोल्यो, त्यो कानुन हुनेछ, उनले जे गर्‍यो त्यो संविधान हुनेछ । नेपाल राजनीतिक रूपमा ७० वर्ष पछाडि धकेलिनेछ र देश नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि काममा हुकुमको शासनको युगमा पुनः प्रवेश गर्नेछ ।
कुनै राजनीतिक प्रणाली मात्र असल भएर पुग्दैन, त्यसलाई हाँक्ने पात्रहरू पनि प्रणालीसरह नै असल हुन जरुरी छ भन्ने अम्वेदकरको विचार नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक ठहरिन आएको छ । हामीले समाजवादउन्मुख गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिने काम भयो, जो वैचारिक रूपले नै यसका विरोधी थिए । मासु जोगाउने दायित्व बिरालोलाई दिएपछि वा बगैँचा स्याहार्ने जिम्मेवारी बाँदरलाई सुम्पेपछि मासु र बगैँचाको जुन बेहालत हुन्छ, अहिले नेपालमा त्यही भएको हो । यसमा दोष बिरालो र बाँदरको मात्र छैन, त्यो सुम्पनेको पनि त्यत्तिकै छ ।
परिणामतः अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले डाडुपन्यू आफ्नाे हातमा भएको बेलामा एउटै गोलीले धेरै कुराको शिकार गर्न खोजेका छन् । उनको कदमले प्रतिनिधिसभाको मात्र अल्पायुमा निधन भएको होइन, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वस्थ राज्यको जिम्मेवारीजस्ता नयाँ संविधानका आधारभूत उपलब्धिहरू उच्च जोखिममा परेका छन् । यी पाँचवटै कुरा प्रम ओलीलाई प्रारम्भदेखि नै ज्यादै नरुचेका कुरा हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै कुरा हो ।
यसका लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा उनले रुचिपूर्वक भाग मात्र नलिएको होइन, यसमाथि ‘बयलगाडा’को भद्दा खिसीट्युरीसमेत गर्ने गरेको कसलाई थाहा छैन र ? तर, परिवर्तित नेपाली राजनीतिक प्रणालीको दु:खान्त यो रह्यो कि नेपालको राजनीतिक संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारीमा उनै ओलीलाई पुर्‍याइयो । विचार र सिद्धान्तविहीन पार्टी एकताको भावनामा बग्दै उनलाई सत्ताको भर्‍याङ सुम्पन पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आफैँ कस्सिए, जो १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षको आगोबाट नेपालमा जनवादी क्रान्तिको रोटी पकाउन भनेर घोषित रूपमा आएका थिए । अहिले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा जे-जे विद्रुप दृश्य देखिँदै छ, त्यो त त्यसको स्वाभाविक परिणाम मात्रै हो-धेरै फेरिएको राजनीतिक प्रणाली, तर पटक्कै नफेरिएको प्रतिगामी पात्रका हातमा गाडी हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिदिनुुको परिणाम ।
नत्र भने त्यो पार्टी एकताबाट नेपालमा त्यत्रो साइज वा आयतनको पार्टी पैदा भएको थियो, जुन देशको इतिहासमै अहिलेसम्म बनेको थिएन । यो विश्वकै पाँचौँ ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हुन पुगेको थियो । माथिदेखि तलसम्ममा सरकारमा त्यो दलको पकड यति विशाल थियो कि २०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसकाे पनि त्यत्रो आयतनको पहुँच हुन सकेको थिएन । त्यसले चुनावमा घोषणा गरेअनुसारको सुधार र रूपान्तरणका काम गर्न थाल्ने हो भने त्यसलाई छेक्न र चुनौती दिन सक्ने कुनै शक्ति नेपालकाे राजनीतिक धरातलमा थिएनन् र दशौँ वर्षसम्म पनि हुन गाह्रो थियो ।
देशको आर्थिक-राजनीतिक संरचनाको चोला फेर्न योसित पूरापूर सामर्थ्य र अवसर निहित थियो । परन्तु, देश बदल्ने यस्तो अभूतपूर्व अवसर हातैमा आउँदा पनि त्यसलाई प्रम ओलीले सत्ता बाँडचुँडको दुई कौडीको झगडामा बल्झिएर अनाहकमा रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएका छन् । के उनीजस्तो राजनीतिको बहुतै चतुर खेलाडीलाई यो अपूर्व अवसरको हेक्का पटक्कै थिएन होला त ?
मासु जोगाउने दायित्व बिरालोलाई दिएपछि वा बगैँचा स्याहार्ने जिम्मेवारी बाँदरलाई सुम्पेपछि मासु र बगैँचाको जुन बेहालत हुन्छ, अहिले नेपालमा त्यही भएको हो । यसमा दोष बिरालो र बाँदरको मात्र छैन, त्यो सुम्पनेको पनि त्यत्तिकै छ ।
उनको तर्क छ- उनलाई ‘कामै गर्न दिइएन’ त्यसैले संसद विघटन गरियो । तर, प्रश्न उठ्छ- उनले त्यस्तो देशै फेर्ने गतिलो जनमुखी कामचाहिँ के गरिरहेका थिए त ? विश्वको राजनीतिक दलको इतिहास नियाल्दा विरोधी नहुने नेता नै हुँदैन, द्वन्द्व नहुने राजनीतिक पार्टी नै हुँदैन । त्यस्तै, विरोधीले काम गर्न दिँदा काम गर्न सक्ने, नदिँदा गर्न नसक्ने व्यक्ति यथार्थको दुनियाँमा नेता नै हुन सक्दैन । नेता भनेको त्यो व्यक्ति हो, जो जस्तोसुकै विरोधीलाई पनि ऊसित आवश्यक मात्रामा सिँघौरी पनि खेल्दै सँगै लिएर लक्ष्यतिर अगाडि बढ्न सक्छ ।
नेता भनेको नदीजस्तो हो, जो आफूलाई छेक्न खोज्ने सबै चट्टानहरू फोडेर, भित्ताहरू भत्काएर वा तिनीहरूसित ठोक्किँदै तिनीहरूसँगसँगै लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्छ । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैँ प्रम ओली पनि यथार्थमा नेता भएको भए उनी पनि आफ्ना विरोधीहरूको सामना गर्दै घोषणा गरेअनुसारका रूपान्तरणकारी र जनमुखी काम येनकेन प्रकारेण गरिरहेकै हुन्थे ।
के उनले साँच्चै नै कबुल गरेअनुसारको जनताको मन जित्ने रूपान्तरणकारी काम भटाभट गरिरहेको भए उनलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै ताकत यो देशमा वा उनको दलमा हुन सक्थ्यो ? उनले काम गरेर देखाउन सकेको भए उनी लोकप्रियताको शिखरमा हुने थिए र उनको राजीनामा माग्ने हिम्मत कसैको हुनै सक्दैनथ्यो । कथंकदाचित् कसैले मागिहाले भने वा उनलाई कसैले अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर हटाउन खोजिहाले भने के उनको प्रतिरक्षा गर्न लाखौँ जनता सडकमा हुने थिएनन् ?
एउटा लोडसेडिङ हटाउँदा कुलमानको प्रतिरक्षामा हजारौँको संख्यामा सडकमा उत्रने नेपाली जाति उनीभन्दा धेरै ज्यादा राम्रा काम प्रम ओलीले गरेर देखाउँदा उनको प्रतिरक्षामा चाहिँ सडकमा नआउने कुरा कल्पना गर्नु सम्भव हुन्छ ?
प्रमको ओलीको र उनका विद्वान अधिवक्ताहरूको भाष्य छ- यो संसदीय प्रणाली हो र संसदीय प्रणाली भनेपछि त्यसमा प्रधानमन्त्री स्वतः सर्वेसर्वा हुन्छन् । उनलाई काम गर्न अप्ठेरो परेपछि उनी कुनै पनि बेला संसद भंग गर्न सक्छन् । कुनै पनि बेला नयाँ जनादेश लिन सक्छन् । यो भाष्य संसदीय प्रणालीको अपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण ज्ञानका कारण पैदा भएको देखिन्छ ।
यो भाष्यले बेलायती संसदको वेस्ट मिनिस्टर ढाँचालाई मुख्य आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद भंग गर्न सक्ने तर्क अघि सारिरहेको छ । हो, लामो समयसम्म संयुक्त अधिराज्य अर्थात् बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद भंग गर्न सक्ने प्रणाली अस्तित्वमा थियो पनि । परन्तु, यो भाष्यका प्रस्तोताहरूलाई के कुराको पछिल्लो सूचना ज्ञान रहेको देखिँदैन भने नेपालको जस्तै राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित भएर सन् २०११ देखि त्यहाँ पनि ‘सुनिश्चित अवधि संसद ऐन २०११’ ल्याई सकिएको छ ।
त्यो ऐनअनुसार अब ससदीय प्रणालीको माउ देश भनिएकै बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद भंग गर्न पाउँदैनन्, चाहे उनलाई काम गर्नका लागि जतिसुकै अप्ठेरो परोस् । त्यहाँ केवल दुईवटा परिस्थितिमा मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् - एउटा, संसद आफैँले दुईतिहाइ बहुमतले संसद विघटन गर्न जरुरी छ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो भने । दुई, नेपालकै जस्तो त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने । अन्यथा आजको बेलायती संसद प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत भंग हुन सम्भव छैन ।
संसदीय प्रणाली भन्नासाथ विश्वभरि एउटै खालको संसदीय प्रणाली छ भन्ने धारणा पनि पूरापूर गलत छ । किनकि, संसारमा अनेकौँ खालका संसदीय प्रणाली छन् । त्यस्ता संसदीय प्रणाली पनि विश्वमा छन्, जहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद भंग गर्न र नयाँ चुनावमा जान पाइन्छ । जस्तो: भारत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड, क्यानाडामा । परन्तु, त्यस्ता संसदीय प्रणाली पनि विश्वमा छन्, जहाँ कार्यकारी प्रमुखले चाहेको बखत संसद भंग गर्न पाइँदैन । जस्तो: नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्यमा, युरोपेली संसद, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस र नेपालमा ।
यी चार वा पाँच वर्षको सुनिश्चित अवधिको संसद भएका संसदीय प्रणाली हुन् । यीमध्ये नेपाल र रुसमा थोरै भिन्नता छ । नेपालमा संसदबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पैदा नहुने भयो भने मात्र त्यस्तो अपवादपूर्ण परिस्थितिमा संसद (प्रतिनिधिसभा मात्र) भंग गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ, अन्यथा संसद भंग गर्न पाइँदैन ।
रुसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई लगातार तीन पटक त्यहाँको संसद-ड्युमाले अस्वीकार गर्‍यो भने वा त्यहाँको सरकारविरुद्ध तीन महिनाको अवधिभित्र दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने मात्र राष्ट्रपतिले त्यो अपवादपूर्ण स्थितिमा संसद भंग गरेर नयाँ चुनावमा जान सक्छन् । अन्यथा संसद अर्को कुनै स्थितिमा भंग गर्न पाइँदैन । त्यो पूरा अवधि बहाल रहन्छ ।
त्यस्ता संसदीय प्रणाली पनि विश्वमा अस्तित्वमा छन्, जहाँ संसदलाई कार्यकारीले भंग गरे पनि अर्को संसद चुनिएर नआएसम्म संसद अस्तित्वमै रहन्छ । जस्तो: डेनमार्क र इजरायलमा । त्यसैले संसदीय प्रणाली भन्नेबित्तिकै कार्यकारी प्रमुखको हातमा मन लागेको बखत संसद विघटन गर्ने हक हुन्छ भन्ने धारणा गलत छ । विश्वमा यस्ता हुने प्रणाली पनि छन् र नहुने प्रणाली पनि । नेपाल त्यस्तो नहुने प्रणाली भएको देश हो ।
आफू हार्ने स्थिति देखिँदा संसदको बैठक, संसदीय दलको बैठक र आफ्नै पार्टीको बैठकबाट त औधि त्रसित भएर भाग्ने प्रम ओलीले कांग्रेसले जित्ने चुनावचाहिँ निष्कण्टक गराऊलान् र देउवालाई चाँदीको किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पलान् भनेर पत्याउनु वर्तमान राजनीतिको कखगसमेत नबुझ्नु हो
नेपाल उसै पनि लिखित संविधान भएको देश हो । यो बेलायतजस्तो परम्परा र कानुनबाट मात्र निर्देशित हुने मुलुक होइन । यस्तो मुलुकमा न्यायालयले संविधानको त्यही व्याख्या गर्ने हो, जो संविधानमा लेखिएको छ । सर्वोच्च न्यायालयलाई संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र हक छ, त्यसलाई मनपरी संशोधन गर्ने हक छैन ।
यदि अदालतले नै संविधानको मनपरी व्याख्या गर्न थाल्यो भने यसउपर पनि आमनागरिकको रहेबचेको विश्वास त्यसरी नै सकिनेछ, जसरी राजनीतिक दलहरूप्रति यतिबेला सकिएको छ । यतिखेर सबैको आँखा अदालततिर छ । तर, अदालतको आँखा संविधानको वास्तविक व्यवस्थातिर नभएर लोभ वा पापतिर हुन गयो भने त्यो बेला संविधान रूपी रेल लिक छोडेर बाहिर कुद्न थाल्नेछ ।
फलस्वरूप हाम्रो देशमा अराजकताको यति भयङ्कर बाढी आउनेछ, जसलाई न त सरकारले थाम्न सक्नेछ, न अहिले अस्तित्वमा रहेका जनविश्वास गुमाएका दलहरूले । त्यसका लागि अरु कोही जिम्मेवार हुने छैन, जसले यो परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो, इतिहासले उसैलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनेछ ।
नेपालका संविधान र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्दा पनि, आफ्नै दलभित्र आन्दोलनको बाटोमा जाने चर्को माग हुँदाहुँदै पनि यतिखेर नेपाली कांग्रेसको सभापतिले नेतृत्व गरेको सानो हिस्सा आन्दोलनको बाटोप्रति अकमकाउँदै चुनावको बाटोतिर आकर्षित हुन लागेको देखिएको छ ।
उपरी तहबाट हेर्दा डब्बल नेकपा काँक्रोझैँ चिरिएको बेला चुनाव तात्कालिक रूपमा उसको फाइदाको विषय हुन पनि सक्ला भनेर कथाकार सोम शर्माझैँ ओछयानमा पल्टिएर गणितीय हिसाब जोड-घटाउ-गुणन गर्न नमिल्ने होइन । तर, आफू हार्ने स्थिति देखिँदा संसदको बैठक, संसदीय दलको बैठक र आफ्नै पार्टीको बैठकबाट त औधि त्रसित भएर भाग्ने प्रम ओलीले कांग्रेसले जित्ने चुनावचाहिँ निष्कण्टक गराऊलान् र देउवालाई चाँदीको किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पलान् भनेर पत्याउनु वर्तमान राजनीतिको कखगसमेत नबुझ्नु हो ।
कतिपयले यो संसदले हामीलाई के नै पो गरिदिएको थियो र यसको विघटनमा हामीले शोक मनाउने र यसको पुनर्स्थापनाका लागि लड्ने भन्ने धारणा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रशस्त मात्रामा राखिरहेछन् । राजनीतिक दलहरूले विगत आधा दशकमा गरेका भुलहरू निश्चय पनि साना छैनन् । उनीहरूले यसबीचमा प्रदर्शित गरेको जवाफदेहीशून्य र न्यून-नैतिक सांस्कृतिक स्तर पनि कम्ता आलोचनायोग्य छैन ।
डब्बल नेकपाभित्रको अवैचारिक/असैद्धान्तिक पार्टी एकता, त्यसभित्रको प्रचण्ड र माधवपक्षले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा समेत निरन्तर प्रदर्शित गरेको आफूकेन्द्रित पदलोलुपता र त्यसबाट पैदा भएको पार्टीगत/सत्तागत झगडा अत्यन्त आलोच्य विषय रहेको छ । त्यो पक्षसित अहिले पनि सत्तारुढ पक्षभन्दा भिन्न र उन्नत देशलाई रूपान्तरित गर्ने कुनै आर्थिक राजनीतिक एजेण्डा देखिँदैन । त्यसबाट हरेक नागरिकलाई रिस पनि चौपट्टै उठेको होला, निराशा पनि औधी जागेको होला । यो बुझ्न सकिने र जायज कुरा हो ।
तर यो रिस र आक्रोश विघटित प्रतिनिधिसभामाथि पोख्नु ‘मिसप्लेस्ड आएन्गर’ अर्थात् कुठाउँमा पोखिएको क्रोध सिबाय केही हुने छैन । प्रतिनिधिसभा भनेको एउटा राजनीतिक साधन सिबाय केही होइन । यो जस्ताको हातमा पर्‍यो, त्यस्तै रूपमा प्रकट हुन्छ । दलहरू र राजनीतिक नेतृत्व रूपान्तरणकारी हुँदा यसबाट राजासित भएको सारा अधिकार खोस्नु पनि हुन्छ, महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको अधिकार घोषणा गर्नु पनि हुन्छ, देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नु पनि हुन्छ, जसरी पुनर्स्थापित संसदले २०६३ सालमा घोषित गर्‍यो । यसलाई जनताको समस्या नै नसुन्ने र नदेख्ने बहिरो र अन्धो बनाउनु पनि हुन्छ । जस्तो: प्रम ओलीले उनको शासनकालमा बनाए । अतः संसद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निरपेक्ष रूपमा संसद स्वयम्‌मा भर पर्दैन, यो कुन परिस्थितिमा कस्ताको हातमा पर्छ, त्यसमा आधारित हुन्छ ।
अहिले संविधानले जुन लिक छोड्न लागेको छ र प्राप्त सीमित उपलब्धि पनि गुम्न लागेका छन्, त्यसलाई फेरि लिकमा ल्याउने बाटो भनेको आन्दोलनको दबाब र अदालतको न्यायमार्फत प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन खारेज गराएर नै हो । अर्को सहज दोस्रो बाटो छैन ।
तर, त्यति गर्दैमा जनताले यति बेला झेलिरहेका मूल समस्याहरू हल भइहाल्ने होइन । यसका लागि अहिलेको आर्थिक-राजनीतिक संरचना नै फेर्नुपर्दछ र त्यो संरचना हाँक्ने नेतृत्व पनि । अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपालमा सारभूत परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु टेलिफोनको लट्ठामुनि तरुलको अपेक्षा गर्नुजस्तै हो ।
अहिले रहेको संविधान, संरचना र त्यसलाई अगुवाइ गर्ने नेतृत्वमा के के दोष छन्, जसलाई यतिखेरै नफेरी हुँदैन । यतिबेला देश बदल्ने आर्थिक राजनीतिक एजेण्डा के हुनुपर्छ ? त्यसबारे आन्दोलनसँगसँगै अर्थपूर्ण बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । परन्तु, यो गर्नका लागि पनि पहिलो प्रस्थानविन्दु लिक छोडेको रेललाई लिकमा ल्याउनु हो । त्यसका निम्ति जो जति शक्ति यतिखेर गोलबन्द हुन तयार छन्, तिनलाई एकतावद्ध गर्नु जरुरी छ । अनि केपी ओली वरिपरि घुमिरहेको अहिलेको राजनीतिलाई जागेका नेपाली जनताको एकतावद्ध शक्ति र त्यसले पैदा गरेको नयाँ नेतृत्ववरिपरि घुम्ने बनाउनु अहिलेकाे मुख्य आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७, ११:५५:००